"पुतलीको भाषा", १ 1936 XNUMX मा ग्यालिसिया जाने कथा वर्तमान साहित्य
"पुतलीको भाषा" १ the कथाहरू मध्ये एक हो जसमा गालिशियन निबन्धकार, कवि र पत्रकार मनुएल रिवासले लेखेका कथाहरूको संकलनमा सम्मिलित छन्। यो मूल रूपमा ग्यालिश भाषामा लेखिएको थियो र लेखक आफैले स्पेनिशमा अनुवाद गरेको थियो। कथा भनेको सन् १ 16 .1936 मा गृहयुद्ध हुनुभन्दा अघि गालिसियाको एउटा साधारण शहरमा एक स्कूलमा लजालु छ वर्षको केटाको मित्रताको बारेमा छ।
१ 1995 १ in मा यसको प्रकाशन पछि, यो स्पेनिश र ग्यालिश भाषाहरूमा लेखिएका सबै भन्दा राम्रो कामहरूको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। केही आलोचकहरूले यसलाई विश्व साहित्यको विधाको सबैभन्दा मौलिक टुक्रासमेत मान्दछन्। यसको "प्रतिष्ठा" १ increased 1999। सैन सेबास्टियन फिल्म फेस्टिवलमा प्रदर्शन गरिएको जोसे लुइस कुएर्डा द्वारा निर्देशित फिल्म अनुकूलन पछि अझ बढ्यो।
1.2 कि तिमी मलाई प्रेम, प्रेम? (ग्यालिश भाषामा कामको नाम)
2 "पुतलीको जिब्रो"
2.1 एक नायक संग रोउन को लागी
2.2 तपाइँले पहिले नै थाहा पाउनुभयो कि यो कसरी समाप्त हुन्छ
3 फिल्म अनुकूलन
मानुएल रिवास ग्यालिश साहित्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हो। २०० In मा उनी रॉयल गैलिशियन एकेडेमीको हिस्सा बने र २०११ मा ए कोरुना युनिभर्सिटीले उनलाई डाक्टर होनोरिस काउसा सम्मान दिए। पेशे अनुसार पत्रकार भए पनि, उनले कविता, निबन्ध र कथाहरूको लागि अथक कलमको साथ "न्यूज म्यान" को पक्षलाई जोड्न सकेका छन्।.
उसको जन्म अ अक्टोबर २ 24, १ 1957 A15 मा ए कोरुयामा भएको थियो। १ XNUMX वर्षको उमेरमा उनी पहिले नै पत्रपत्रिकाको लागि लेखिरहेको पत्रकारको रूपमा जीविका चलाउँदै थिए। ग्यालिश आदर्श। उच्च माध्यामिक विद्यालय पूरा गरेपछि, उहाँ म्याड्रिड सूचना विज्ञान पढ्न बसाइँ सर्नुभयो। चाँडै ऊ सामेल भयो तेइमा, पहिलो साप्ताहिक पूर्ण ग्यालिशमा प्रकाशित भयो। वर्तमानमा, उनले अखबारलगायत बिभिन्न प्रिन्ट मिडियामा सहयोग पुर्‍याउँछन् देश.
विभिन्न दृष्टिकोणबाट लेखनको लागि आफूलाई समर्पण गर्नुको अलावा रिवास एक प्रख्यात पर्यावरणविद् हुन्। सन् १ 1981 XNUMX१ मा उनले एट्लान्टिक खाँदको यात्रामा भाग लिए जहाँ परमाणु फोहोर फालिएको थियो। त्यो विरोध अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनले आणविक फोहोरको लागि कब्रिस्तानको रूपमा समुद्री भुइँहरू प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाए पछि समाप्त भयो।
२००२ मा गलिसियाको तटमा डुब्ने तेलको जहाजले “प्रतिष्ठा प्रकोप” -को परिणाम स्वरूप नागरिक प्लेटफर्मको निर्माणलाई प्रेरित गर्यो फेरि कहिले पनि। त्यस्तै, ग्रीनपीस, स्पेन अध्यायको संस्थापक साझेदार हो र उसको कार्यलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले मान्यता दिएका छन्।
कि तिमी मलाई प्रेम, प्रेम? (ग्यालिश भाषामा कामको नाम)
माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ?
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ?
माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? साधारण थिमको साथ १ 16 कथाहरूको संकलन हो: प्रेम। यो विभिन्न दृष्टिकोणबाट सम्पर्क गरिएको एक भावना हो, एक धेरै व्यापक दायरा सहित (लगभग) सर्त द्वारा कभर सबै भिन्नताहरू सामेल गर्न सक्षम छ। यसले कुनै शीर्षक पनि छोड्दैन, जुन राम्रोको लागि वा खराबको लागि पनि त्यति नै आवश्यक छ: हार्टब्रेक।
रिवास, मा सक्रिय छ कविता र s० को दशकको अन्तबाट आख्यान, यस शीर्षक संग यसको निश्चित अभिभारा प्राप्त। उनको पहिलो पुस्तक उपन्यास थियो सिकर्मीको पेन्सिल (१ 1988 XNUMX); बहु पुरस्कारहरूको विजेता र एन्टोन रेक्सा द्वारा सिनेमामा लगिएको। पछि, उनले कथाको अर्को संकलन विमोचन गरे: एक मिलियन गाई (1990), नि: शुल्क रचना कविताको साथ आधुनिक गीतको बोल्ड मिश्रण।
पुतली को जीभ।
तपाइँ यहाँ कथा किन्न सक्नुहुन्छ: को भाषा ...
"पुतलीको जिब्रो" समावेश गरिएको कथाहरूको दोस्रो हो माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? पहिलो कथा प्रकाशनको नाम दिन्छ। यो संरचनात्मक स्तरमा अत्यन्तै सरल कथा हो। यसमा, छ वर्षको बच्चाको सबैभन्दा बचकाना कल्पनालाई विस्तृत पत्रकारिता रिपोर्टको साथ ठ्याक्कै र लगभग अज्ञानीसँग पूरक हुन्छ। अधिक के हो भने, कुनै विवरणहरू अवसरमा छोडियो।
त्यसकारण, कामले केहि पृष्ठहरूमा धेरै जानकारीहरू भेला गर्दछ (१०)। वर्णनको अभिलाषा नगरे पनि - लेखकसँग यसको लागि समय छैन - सन् १ 1936 XNUMX मा ग्रामीण गालिसियामा पत्ता लगाउन यो धेरै सम्भाव्य छ। यस कारणले गर्दा, प्रकृतिको सबै गन्धहरू सास फेर्न सम्भव छ, रूखहरूको बनावटलाई छुनुहोस्, छुनुहोस्। झाडीहरू, सिनाई चढ्नुहोस् "र पुतलीको जिब्रो पनि हेर्नुहोस्।"
एक नायक संग रोउन को लागी
स्प्यारोको साथ पहिचान, कथाको मुख्य पात्र, सजिलो छ। त्यसोभए, पाठकले आफुलाई स्कूल जाने डरले शिक्षकको बारेमा बुबाले डराएको डरले महसुस गर्दछन्। ठिकै छ, अनुमान छ, शिक्षक "हिट"। कथा यति राम्रोसँग गरियो कि दर्शकले लगभग मूत्रको दुर्गन्ध महसुस गर्न सक्दछ जब आतंकले बच्चालाई स्फिंटरमा नियन्त्रण गुमाउँछ।
र हो, जसले पढ्छ भने, यदि उसले आफैंले राम्रोसँग पत्रमा डुबायो भने, त्यो सानोको साथमा लजाएको छ - लज्जित छ - ऊ आफ्नो साथीको अगाडि आफ्नो प्यान्ट झिकेर भागेको छ। जहाँसम्म, पछि सबै कुरा शान्त र को दया को लागी धन्यवाद डन ग्रेगोरियो, एक "हाड" को अनुहारको शिक्षक। पछिल्लो एक चरित्र हो जससँग ज्ञान प्रसारित गर्ने विशाल क्षमता छ, एक गुण जुन यसको अप्रिय उपस्थितिमा विपरित आनुपातिक हुन्छ।
तपाइँले पहिले नै थाहा पाउनुभयो कि यो कसरी समाप्त हुन्छ
डन ग्रेगोरियो रिपब्लिकन हो, केटिको बुबाको जस्तै। तसर्थ, विद्रोहीहरूले दोस्रो स्पेनिश गणतन्त्रको अस्तित्व समाप्त गरे पछि तिनीहरूले आफ्ना वास्तविक राजनीतिक आदर्शहरू लुकाएनन् भने परिणामहरू अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
पहिलो बnd्ग छैन। दोस्रो, अपमानित, उसले ठूलो विश्वास नगर्ने चीजहरूको रक्षा गर्छ। आफूलाई बचाउनको लागि उदासिनतामा उसले आफ्नो मासूम छोरालाई घिस्याउँछ, जो तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्दैन, तर सबै गलत छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा, सौन्दर्य बर्बरता द्वारा बगेर गयो। यद्यपि कथाका मुख्य पात्रहरूलाई यो थाहा छैन, पाठकहरूले बुझ्दछन् कि अघिल्लो "भोली" कहिल्यै फर्किने छैन।
एक स्क्रिप्टको साथ जुनसँग उसको आफ्नै सहकार्य थियो मानुएल रिवास, जोसे लुइस कुएर्डा द्वारा रूपान्तरण, प्रतीकात्मक रूपमा, विस्फोट (शब्दको राम्रो अर्थमा)। त्यो कुरालाई यो फिल्म सातौं कलाको सम्पूर्ण इतिहासमा ल्याटिन अमेरिकामा सब भन्दा राम्रो उत्पादकको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
वास्तवमा, फिल्मले गोया पुरस्कारको XIV संस्करणमा सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित स्क्रिनप्लेको लागि पुरस्कार जित्यो। जोसँग यो कथा पढ्ने अझै अवसर पाएका छैनन् तिनीहरू समयमा छन्। किन? ठीक छ, यसले केवल १० मिनेट लिन्छ गलिसिया घाँस मैदानहरूमा यात्रा गर्न र प्रशंसा गर्न, पहिलो व्यक्तिमा, "पुतलीको भाषा।"
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कथाहरू » पुतली को जीभ
कास्टिलियन भाषाका ठूला लेखकहरू भेट्नु धेरै रोचक छ, तपाईको पुस्तक पढ्न र फिल्म हेर्न म धेरै उत्सुक थिएँ भनेर देखें।
आर्थर रिम्बाउड। उनको जन्म को लागी केहि कविताहरु
मृत्यु कवि समाज